အုန်းသီး တလုံး ၅၀၀ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » အုန်းသီး တလုံး ၅၀၀
အုန်းသီး တလုံး ၅၀၀
Posted by ဆူး on May 2, 2011 in Photography | 27 comments
ဆူး စိတ်ကူး ဓါတ်ပုံ အုန်းသီး
အုန်းစိမ်းရေ သောက်အုန်းမလား.. တလုံး ၅၀၀
နေရောင်ခြည်နဲ့ သဘာဝ စိမ်းစိုနေတဲ့ အုန်းသီး အရောင် တောက်ပနေတယ်။
အန်တီဆူးက အုန်းသီးလဲ ရောင်းတယ်ပေါ့။
ဆိုင် လိပ်စာ လေး ထည့် ပေးလေ။
ဒါမှ လာ အားပေးလို့ ရမှာပေါ့
အုန်းရေ ကြိုက်တယ်…ဒါပေမဲ့ အပူကန်မှာစိုးလို့… ချောင်းသာသွားတုန်းကတော့ ရေစိမ်ပြီး အုန်းရေ သောက်ရတာ ကောင်းတယ်… ။
အခွံမနွှာထားပဲ.. သောက်မယ်ဆိုမှ နွှာပေးတာလား..။
အညှာတွေလည်း ပါနေတာမို့ .. သောက်တဲ့အုန်းသီးမဟုတ်ပဲ.. နတ်တင်တဲ့ဟာကြီးဖြစ်နေလို့.. သောက်ရင်းတန်းလန်း..နတ်ကဝေစုလာတောင်းရင်..ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်း…။
မနေ့ကတင် မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့စကားပြောဖြစ်တာ… ရံပုံငွေပွဲတခုမှာ ဗီယက်နမ်ကျောင်းသားတွေ.. အုန်းသီးတွေယူလာပြီး အုန်းရေရောင်းတယ် ပြောတယ်..။
သဂျီးတောင် နောက်ကျပ်.. အဲ… နတ်ကြောက် တတ်နေပြီလား။
သန်လျင် ကျောက်တန်း ဘက်သွားတော့ ဆိုင်တိုင်း လိုလို ရှေ့မှာ အုန်းသီးတွေ ချထားတာ အဲဒီလိုကြီးဘဲ…
အုန်းရေ သောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ထိပ်ကို ဓါးနဲ့ ခုတ်.. အုန်းသီးရဲ့ အတွင်းအမာ ရဲ့ ထိပ်နား ရောက်တဲ့ အထိ ခုတ်ရင် အုန်းသီး အတွင်းကို ပိုက်ကလေး လွယ်လွယ်ကူကူ ၀င်နိုင်အောင် အုန်းသီးမှာ အခွံမာ နေရာ လွတ်နေတာ တခုရှိတယ် လွယ်လွယ် ပြောရင် မျောက်မျက်နှာ နေရာလေ.. မျောက် မျက်စိ တလုံးဖောက်ပြီး အတွင်းကို အဲဒီကို ပိုက်ထည့်ပြီး စုတ်သောက်တာပါပဲ။
တလုံး ၅၀၀ ဆိုတာ ၀ယ်သောက်လာလို့ ပေးခဲ့ရတဲ့ ဈေးပါ။
(မှတ်ချက်။ ပိုက်ဆံမရှိသောကြောင့်လည်းပါသည် ( ^ _ * ) )
ဆူး ရဲ့ပို့စ် ကို မနက်ကတည်းကတွေ့တယ်။ ဘယ်သူမှ မန့်ထားတာ မတွေ့သေးဘူး။ ဈေးဦးမပေါက်သေးဘူး ဆိုပြီး တခြားပို့စ်တွေ လျှောက်ဖတ်နေတာ အခုတော့ ဆူး ဈေးဦးပေါက်ရုံတင်မကဘူး ရောင်းလို့တောင် မလောက်မှာ စိုးရတယ်။
အမျိုးသမီးတွေကိုယ်ဝန်ရှိချိန်မှာ (အသားဇွန်းခြစ်လောက်ရှိသော) အုန်းသီးနုနုအရည်သောက်တာ အင်မတန်အကျိုးများတယ် လို့ရှေးလူကြီးတွေပြောတာကြားဖူးပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ နေ့တွက် ကိုက်ပြီ.. တော်တော် ရောင်းကောင်းတာဘဲ။ ဟီးဟီး
အုန်းစိမ်းရေ + Johnnie Walker Blue Label whiskey = ???
အုန်းစိမ်းရေ + Soju = ???
အုန်းစိမ်းရေ + Vodka = ???
ကဲ အပေါ်က formula ပုစ္ဆာများကို ဖြေနိုင်သူများ ဖြေပေးပါခင်ဗျား။
က လားးးးးးးးး မ လေးးးးးးးးးးးး
၀ုန်း စိမ်း ရောင်းတယ်။
မိုက်ကယ် ဂျော်နီ အောင်ပု မရောင်းဘူး။ နဟိ နဟိ.. (လက်ကလေး လှုပ် ခေါင်းကလေး ခါ)
အယ် ကိုးးးးးးး ကြီ ၀ုန်း စိမ်း ဘဲ ၀ဲပါ။
အားကိုကြီး ၀ုန်းစိမ်းပဲ ၀ဲမှာပါ။ ကျန်းဒါက ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ယူလာမှာနော်။ ကလားးးးး မလေးးးးးးး formula မားသိဘူးနော် ရတယ်။ ရွားထဲမာနော် အဘပုဒို့ သူကြီးတို့ etone တို့ ကူညီပေးမယ်။
မှတ်ချက် india body language တွင် ခေါင်းခါခြင်းသည် OK ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်သားဘူးပါသည်။
အုန်းသီးကို အပင်ပေါ်ကနေ ပစ်ချလို့ ဒဏ် ထိသွားရင်တော့..
အုန်းစိမ်းရေက ရှတတ ဖန်တန်တန် စပ်ဖျင်းဖျင်း စပါကရင် လိုလို ဆဲဗင်းအပ်လိုလို.. ဂစ်ပါတဲ့ အရည်လိုမျိုး.. အချိုရည်လောက်တော့ မချိုဘူး။
မမဆူး… အရေသောက်ပြီး ပြန်ပေးလိုက်တာလား ဆိုင်ရှင်က ခွဲမကြွေးဘူးလား ……. အိမ်မှာ ဆိုရင်တော့ အသားနုနုလေးတွေကို ဇွန်းနဲ့ခြစ် အဲဒီ အုံးရေနဲ့ ပြန်ရော သကြား ပါးပါးလေးထည့် ရေခဲတုံး ခပ်သေးသေး နှစ်တုံး သုံးတုံးလောက်ထည့် ဇွန်လေးနဲ့မွေပြီး စားလိုက်ရလို့ကတော့………………….
အုန်းသီး ကို ခါတိုင်းတော့ အရည်သောက်ပြီး အုန်းသီးခွဲ.. ဇွန်းနဲ့ ခြစ်စားတယ်။
စကားမစပ်.. ၂၆လမ်းဈေးမှာ.. ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ဟာသ လူရွှင်တော် ဦးပလာတာ ရောင်းတဲ့ အုန်းရေ ကို ငယ်ငယ်က တခွက် ၁ကျပ်နဲ့ ၀ယ်သောက်ဘူးတယ်။
သူ့ အိမ်က အုန်းသီးခြစ်တဲ့ ဆိုင်ဆိုတော့ အုန်းသီး ခြစ်ရင် ခွဲလို့ရတဲ့ အရည်တွေကို မလွတ်ပြစ်ဘဲ ဒန်အိုးလေးထဲ ထည့်ပြီး ရောင်းတယ်။ ကလေးတွေက သွားဝယ်သောက်ကြတယ်။ ဆူး အပါအ၀င်ပေါ့။ အုန်းရေ ခပ်ရင် အဘိုးကြီးက လက်တုန်တာ လွန်ရော..
အဘ ပု ဓနိရေက ပိုကောင်းတယ်ဗျ………
အုန်းသီး တွေရောင်းကောင်းနေတာ မသိလိုက်ဘူး ။ ကျန်သေးရဲ့လား ဆူးရေ .အုန်းသီးဇွန်းခြစ် ကြိုက်မှကြိုက်
အီးတုန်း(Etone)တော့ တော်တော်လေး ပေါ်ပြူလာတောင်ဖြစ်နေပါရော့လား.. ချစ်တဲ့သူရော၊ ညှစ်တဲ့သူရော၊ တန်ဖိုးဖြတ်တဲ့သူရော၊ သောက်နည်းနိသရည်းတင်ပြတဲ့သူရော၊ ကြော်ငြာပေးနေတဲ့သူရောပါလားကွယ်ရို့
ပြောလိုက်မယ်.. အုန်းသီးစားတာများရင် ခေါစုခင် (မှားလို့) ချောစုခင်လို မျက်နှာရှေ့မှာ သွားတွေကို တံစိတ်မြိတ်ထုတ်ထားသလို ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်၊ အုန်းရေတွေ သောက်တာများသွားလျင်တော့ဖြင့် မျက်နှာပေါ်တွင် တောင်ပို့ငယ်လေးများထွက်လာပြီး နဂိုကမလှသော ရူပကာမှာ သူ့အလိုလိုပင် ဆိုးသွားနိုင်ကြောင်း….
နာဂစ်တုန်းဖြစ်သွားတုန်းကထက် အပင်ပေါ်မှာအုန်းသီးတွေ မရှိတော့ပါဘူး
နောက်ဘယ်လို စားသုံးကုန်တွေကို ဆက်လာရောင်းချမလဲဆိုတာကတော့
အန်တီ ဆူး ကိုမေးကြည့်ကြစို့…………………..
ဖွလိုက်ဦးမယ်၊ တပေါက်အုန်း နဲ့ ၂ပေါက်အုန်းက ပီယဆေးဖော်ရင်စွမ်းတယ် ပြောကြတယ်၊ ကျနော်ကတော့ ၃ပေါက်အုန်း(ထိပ်မှာမျက်စိလိုအရာလေး၃ခု) ပဲတွေ့ဖူးတယ်၊ အုန်းအမြူတေဟာလည်းလာဘ်ရွှင်တယ်ပြောကြတယ်၊ အုန်းထဲမှာ နကဘာအုန်းကနာမည်ကြီးတယ်၊ အလုံးသေးသေးနဲ့ အုန်းသီးအဆံ ချိုဆိမ့်နေတာပဲ၊ ဆေးဘက်လည်းဝင်တယ်တဲ့။
အုန်းသီး အလုံး အတွင်းထဲက အဆံ ကလေး ကို သကျူ့သွေး လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အုန်းသီး အမြုတေ လို့လည်း ခေါ်တယ်။
အုန်းရေတွေ ၀ နေပြီး အရသာ ကတော့ ပွပွ လေး ဖြစ်နေတဲ့ ဖော့တုံးလေး ကို ၀ါးရသလိုပါပဲ.. ကိုက်ပြီး ၀ါးလိုက်တိုင်းမှာ အုန်းရေ အရသာ ချိုချိုလေးက ထွက်ထွက်လာတယ်။
အဲဒါမျိုးက အုန်းသီး သိပ်ရင့်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ အပင်ပေါက်ချင်လို့ ဖြစ်တဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ နုတဲ့ အုန်းသီး သဂျု့သွေး လုံးဝ မပါတတ်ပါ။